भ्रष्टाचार के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा हेर्नुहोस्
सुरु ऋण wiki पत्र बंधक
भ्रष्टाचार के हो?
जर्मन कानूनमा, दुई प्रकारका आधारभूत ऋणहरू छन्। को पत्र बंधक र Encumbrance, एक पत्र आधारित ऋण को मामला मा, एक सील संग एक मूल बंधक बंधन प्रासंगिक भूमि रजस्टर कार्यालय संग जमा गरिनेछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फायदा असाइनमेन्टको विशेष लचिलो हैंडलिंग हो (उदाहरणको लागि, जब क्रेडेन्ट आवश्यक छ वा स्वैच्छिक रूपमा परिवर्तन गरियो)। बंधक एक विशेष प्रकारको कर्जा हो। यो एक विस्तारित फारममा प्रयोग गरिन्छ। पत्रले लेनदेनलाई सौंपाएको छ, ताकि उसले विशेष पत्र-आधारित ऋणको सबै अधिकार पाउनेछ। एक पत्रको साथ आधारभूत ऋणको स्थानान्तरण लिखित माध्यमद्वारा गर्न सकिन्छ अर्पण साथ नै एक पत्र स्थानांतरण या मौखिक असाइनमेंट, साथ नै एक पत्र स्थानांतरण र एक भूमि दर्ता प्रविष्टि। साथै पत्र कोल्ड कर्जा असाइन गर्न सकिन्छ, किनभने यो लिखित असाइनमेंट घोषणा प्रस्तुत गरिएको छ। आधारभूत ऋण पत्रको स्थानान्तरणको समय, असाइनमेन्ट कानूनी रूपमा बाध्यकारी छ। यो आधारभूत ऋण आधारभूत बंधक भन्दा कम पटक प्रयोग गरिन्छ, किनभने 25% ल्याण्ड रजिस्टर लागतमा अधिक छ र यसरी एउटा कागजात गुमाउन सक्छ। भ्रष्टाचारको एक महंगा महसुस गर्नु आवश्यक छ।
Letteral Debt - A Land Lien
बंधक वास्तव मा एक बंधक सही छ। यो सधैँ भूमि दर्तामा एक प्लानको लागी प्रविष्ट गरिएको छ। एक मकान मालिक ऋण को विपरीत, जो केवल भूमि दर्ता मा एक प्रविष्टि द्वारा दस्तावेज को रूप मा, मूल कर्जा पत्र को मूल ऋण पत्र को निर्माण मा रूप मा। यो कागजात निर्माण उच्च लागत संग सम्बन्धित छ।
बंधक सामान्यतया एक ऋणको लागि संपार्श्विकको रुपमा राखिएको छ। यस अवस्थामा, प्रश्नमा क्रेडिट बैंकले सम्बन्धित सम्पत्तिको लागि प्रदान गर्दछ, जसको अर्थ छ कि सीधा बंधक प्रत्यक्ष हेज हो जुन जुन सम्पत्तिको डेबिट गर्न प्रयोग गरिन्छ। सबै भन्दा माथि, दीर्घकालिक र धेरै जोखिमपूर्ण अचल सम्पत्ति ऋण र साथसाथै निर्माण ऋण को मामला मा, आधारभूत ऋण बैंक को लागि मानक सुरक्षा को रूपमा मानिन्छ। यस प्रकार क्रेडिट संस्थाहरू भुक्तानी उल्लङ्घनहरूको विरुद्धमा हिसाब गर्छन्।
अक्षर जमीन ऋण को आधार मा फौजदारी मा
पत्र बंधक depositing गरेर, creditor (बैंक, उदाहरणका लागि) को सुरक्षित सम्पत्ति को सही फौजदारी र ऋणी यसको क्रेडिट सम्झौता अन्तर्गत भुक्तानी दायित्व प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने सम्पत्ति सम्बन्धित हुनेछ। प्रवर्तनको आय पछि भुक्तानीकर्ताको बकाया ऋण तिर्न प्रयोग गरिन्छ। ऋणी एक बंधक द्वारा समर्थित थिए जो विभिन्न लेनदारों, थप दायित्व छ भने, तपाईं पहिलो देशमा रजिस्टर दर्ता थिए जो पहिले माग, सेवा गर्छन्। यसैले, दर्ता रेजिस्टरमा प्रविष्टिहरूको अर्डरले निर्धारित गर्दछ कि कुन ऋण फिर्ता गरिने छ।
यस्तो आधारभूत ऋणको विशेषताले आधारभूत ऋण पत्रको तयारी गर्ने हो जसले लेनदेन प्राप्त गर्दछ। सबै सम्बन्धित जानकारी आधारभूत बंधक बांडमा प्रविष्ट गरिएको छ, जुन भू-दर्तामा पनि छन्। आधारभूत ऋणको अधिकारले लेन-देन बांडलाई सम्बोधन गरी सम्बन्धित लेनदेनलाई हस्तान्तरण गरेको छ। एक पत्र संग आधारभूत कर्जा लिखित असाइनमेंट द्वारा अन्य क्रेडिटरहरु लाई हस्तांतरित गर्न सकिन्छ, जो चाहे वांछित हुन सक्छ। यद्यपि, पत्रको हस्तान्तरण जरूरी भूमि रजिस्टर मा रेकर्ड गरिएको छैन।
लाभ र हानि:
पत्र आधारित ऋणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फायदा हो, आधारभूत कर्जाबाट अर्को सम्भावनाको सम्भावित कार्यको लागी, कुनै दर्ता रजस्टर प्रविष्टि गर्नु पर्दछ। असाइनमेन्ट तेस्रो पक्षका लागि पहिचानयोग्य छैन र त्यहाँ नयाँ नयाँ रजिस्टर लागतहरू छैनन्। एक पत्र संग एक बंधक को सबै भन्दा ठूलो नुकसान एक उच्च लागत: आधारभूत ऋण पत्र को जारी को लागि, लगभग 25 प्रतिशत खाली पुस्तक उधार ऋण को मामला मा अधिक शुल्क लगाइएको छ। यदि आधारभूत कर्जा गुमाएको छ भने, उनीहरूलाई गैरकानुनी कल-अप प्रक्रियाद्वारा निर्बल घोषित गरिएको छ।
भूमि शुल्कको अर्डर र रद्द
यदि एक सम्पत्ति मालिकले भूमिसँग भूमि र सम्पत्तिसँग सहमत सहमत भने ऋण सुरक्षित उद्देश्यको लागि चार्ज, त्यसपछि एक नामित भूमि रजिस्टर प्रयोग गरिन्छ। ल्याण्ड रजिस्टर भूमि रजिस्टर को लागी आवेदन भएको छ। भूमि दर्तामा प्रवेशको लागि आवश्यक शर्त मालिकको वांछित वा सार्वजनिक रूपमा प्रमाणित प्राधिकरण हो, जुन भूमि रजिस्ट्री अफिसमा उपलब्ध हुनु पर्दछ। आधारभूत कर्जा मेटाउन तपाईंलाई आधारभूत ऋण र लेनदारबाट मेटाउने प्रमाणित प्रमाण आवश्यक छ। आधारभूत कर्जा पत्रको फिर्तीले आधारभूत ऋणको रद्द नगरेको छैन।
अघिल्लो लेखलगानी ऋण
अर्को लेखसहभागी बन्धन